मानवता हराएको ठाउँ, एकजना महिलालाई छिमेकी महिलाले कु’टीकु’टी ह’त्या (भिडियो हेर्नुस्) - Nepal Insider
मानवता हराएको ठाउँ, एकजना महिलालाई छिमेकी महिलाले कु’टीकु’टी ह’त्या (भिडियो हेर्नुस्)
March 19, 2020 216
भक्तपुर । भक्तपुरमा एक महिला केही दिन अघि मात्र भाडामा बस्न आएकी थिइन् । उनको एक छोरा वाहेक परिवारको अरु सदस्य भएको छिमेकीलाई थाहा छैन । छोराको नाम अनिष राई र महिलाको नाम विमला राई हो । उनको छोरा दाईसंग पेन्टिगंका काम गर्न वाहिर थिए ।
दाईको घरमै बस्ने उनको योजना थियो, तर दाईलाई फोन गरेर कसैले छोरालाई तत्काल पठाइदिनु भनेपछि उनी घर आए । तर घर आउँदा उनको आमाको निधन भइसकेको थियो । स्थानियका अनुसार केही छिमेकीहरु महिलाहरुले कु ट पि ट गरेर ह त्या गरेको बताएका छन् ।
आफुलाई आमाले पनि दुई दिन पहिला फोन गरेर छिमेकी महिलाको घरमा कुकुरले मासु खाइदिएको बहानामा छिमेकी महिलाले कु ट पि ट गरे भनेर फोन गरेकी थिइन् । तर त्यसको भोलीपल्ट निधन भयो । अघिल्लो दिन पनि स्थानिय महिलाहरुले उनलाई बाँ धेर राखेको पनि आफुले थाहा पाएको बताए ।
घ ट ना भएको थाहा पाएपछि पुगेका युट्युवरहरुले प्रश्न सोधेर र्याखर्याख्ती पार्दा उनी बोल्नै सकेनन् । जसले मेरो आमालाई यस्तो गरे उनीहरुलाई सजाय दिनुपर्छ, उनले भने, बाहिरवाट चुक्कुल लागेको छ भित्र मेरो आमा मृ त हुनुहुनछ । यो घ टना को निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । उनले सानैमा उनको बुवाले पनि छोडेर गएको बताएका छन् ।
करिब ५ जना स्थानिय महिला मिलेर एक जना करिब ३५ वर्षकी महिलाको ज्यान लिएको घ ट ना भक्तपुरमा सार्वजनिक भएको छ । घ ट ना मा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले केही महिलालाई प क्रा उ गरेका छन् । एक जना महिलाले केही महिलाले कु ट पि ट गरेको पनि देखेको भिडियोमा बताएकी छन् । एक जनालाई किन यतिका धेरै महिला मिलेर कु टे को भनेर आफुले सोध्दा यसले मुख छोड्यो भनेर जवाफ दिएको पनि ति महिलाले बताएकी छन् । मृ त हुनुभन्दा अगाडी आफुले घा उमा तेल पनि लगाइदिएको बताए ।
पहिला कु ट पि ट भइसकेपछि उनले ति पी डित महिलालाई तानेर आफ्नो घरमा लगेको र तेल लगाइदिएको बताइन् । फेरी आफु सिलिण्डर लिन पसलमा गएको बेलामा उनलाई फेरी उनी माथि कु ट पि ट भएको ति महिलाले बताएकी छन् । भक्तपुरको मनोहरा नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीमा भएको यो घ ट ना ले अहिले मानवताको पराकाष्ट नाघेको देख्न सकिन्छ । पाँच जना महिला मिलेर उनलाई पानीको पाइपले पि टेको भिडियो देख्न सकिन्छ ।
Prevकोरोना भित्रन नदिन बोकाको ब’लि दिएर कुल पूजा
Nextनेपालमै बन्यो कोरोना भाईरसको औषधी? म नेपालीहरुलाई बचाउन कोरोना भाईरसको औषधी फ्रिमा दिन्छु(भिडियो)
के तपाईलाई आर्थिक संकटले छोडेन ? मंगलबारको दिन गणेशजीको पूजा गर्दा जप्नुहोस् यी ११ मन्त्र।
कोरोना फैलिएको ८ देशबाट घर फर्किँदै हुनुहुन्छ ? नेपाली नागरिक घर फर्किँदा पनि सं’क्रमण नभएको प्रमाण चाहिन्छ-सक्दो सेयर गरौँ
त्रिभुवन विमानस्थलको शौचालय पुगेर पर्यटनमन्त्रीले सोधे यो के हो हाकिम साब काम गर्न नसक्ने भए ठाउँ खाली गर्नुस्
पूर्वराजाले केकीलाई भने म तपाईंलाई चिन्छु फिल्म पनि हेरेको छु
काेराेनाका कारण पहिलाे पटक एक नेपालीकाे ज्यान गयाे (39012)
लकडाउनमा दूध किन्न निस्केका युवाको प्रहरीको लाठीचार्जबाट मृत्यु, परिवारमा रुवाबासि (11416)
नेपालमा कोरोना संक्रमितकहरुको संख्या धमाधम बढ्न थाल्यो (10437)